अर्थ संसार: अहिलेको विवाद सेना र सरकारप्रमुख विचको इगो हो
अहिलेको विवाद सेना र सरकारप्रमुख विचको इगो हो
पूर्वउपरथि प्रदीपप्रकाश बम मल्ल
नेपाली सेनाको दुर्इ प्रकरण्ाले विवादको रुप लिएको छ । एउटा सरकारले सेनाका आँठ जनर्ेलको म्याद नथपेको र अर्को प्रधानसेनापति रुकमाङगत कटुवाललार्इ सोधीएको स्पष्टिकरण्ा । आठँ जनर्ेलको म्याद नथपेको विष्ाय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने प्रधानसेनापतिलार्इ कारवाहीको विष्ायले दलहरूविच धुव्रीकरण्ा देखीएको छ । सेनाको यो विवादलार्इ सरकारको नेत ृत्व गरिरहेको दल एकिक ृत नेकपा माओवादी र यस इतरका राजनीतिकदल यसलार्इ नागरिक सर्वोच्चतासँग जोडीका छन्‍ । त्यस्तै प्रतिपक्ष्ाी दल काङ्‍ग्रेस र यस इत्तरकाले सेनामाथी माओवादीले कब्जा जमाउन खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन्‍ । यसै सन्र्दभमा गत बुधबार हामीले पूर्वउपरथि प्रदीपप्रकाश बम मल्ल सँग कुराकानी गरेका छौं । पूर्वउपरथि मल्लको को पनि ०६३ असार ९ पदावधि समाप्त हुदा तत्कालिन गिरिजा सरकारले म्याद थपेको थिएन । सर्वाेच्चले पुर्नबहालीको फैसल्ला गरेपनि रक्ष्ाा मन्त्रालय जङ्‍गी अड्‍डाले यिनलार्इ पूर्नबहाली गराएको थिएन । प्रस्तुत छ यिनीसँग सेना विवाद लगायत मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थावारे सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :
सरकार र सेनाको विवाद बढ्‍नुको कारण्ा के होला ?
सेना पनि सरकारकै अङग हो । तत्कालिन राजाको मातहतमा रहेको नेपाली सेना लोकतन्त्रको स्थापना पछि सरकारकै मातहतमा आएको छ । नेपाली सेनाले पनि सरकारको नीति नियम मान्छु भनेर प्रतिबåता पनि जनाउदै आएको छ । सेना सरकारको अभिन्न अङग हो तर पनि यसको स्वतब्त्र अस्तित्व छ । अहिलेको विवादलार्इ हेर्दा सेना र सरकारप्रमुख विचको इगो हो भन्ने लाग्छ ।
कस्तो र्इगो ?
माओवादीको सरकारमा गएदेखीकै लक्ष्य भनेको माओवादी लडाकूलार्इ नेपाली सेनामा समायोजन गनर्े हो । तर यसबारेमा प्रधानसेनापति रुकमाङगत कटुवालले फरक धारण्ा राख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको मत बाभmीदै आएको थियो । सेना समायोजन गर्न माओवादीले कटुवाललार्इ प्रमुख बाधक देखेको छ । यसै कारण्ाले माओवादीले यो कदम चालेको जस्तो देखीन्छ ।
सरकारले त सैनीक भर्नालगायतका कारण्ा देखाएको छ नि ?
सैनिक भर्नाको विवाद ठुलो कुरा होर्इन । भर्नावारे विवाद बढ्‍नुकै मुख्य कारण्ा नै माओवादी लडाकूको ब्यबस्थापनमा अन्योल भएर हो । सेनामा पद रित्तm गराएर त्यसमा आप्‍mना लडाकू भर्ति गर्ने माओवादीको योजना छ । तर, सेनाको भर्ना नियमीत प्रक ृया हो । सेनाको आवश्यकता अनुसार पद खाली भएमा भर्ना लिन सक्छ । यसमा सरकार अथवा अनमिनले हस्तक्ष्ोप गनर्े कुरा होइँन ।
सरकारले स्पस्टिकरण्ा सोधेपछि प्रधानसेनापतिलार्इ हटाउने तयारी गरिरहेको छ नि ?
यो माओवादीको सेनामाथि हस्तक्ष्ोप गनर्े रण्ानीति हो । कुनै बैधानीक सरकारले मातहतको व्यक्तिm र निकायसँग स्पष्टीकरण्ा माग्न सक्छ । त्यसका निम्ति यो समय उपयूत्तm बेला होर्इन । यो संत्रmमण्ा कालमा एक त सबैको ध्यान यसको व्यवस्थापनमा र संविधान निर्माण्ामा हुनुपर्छ । त्यसमा पनि यो विष्ायमा राजनीतिक सहमति जुट्‍न सकेको छैन । अहिले माओवादीले आप्‍mनो एकलौटी सर्वसत्तावाद कायम गर्न लागिरहेको जस्तो देखीन्छ । उनीहरुले सेनामा मात्र होइन, सबै क्ष्ोत्रमा हस्तक्ष्ोप गरेका छन्‍ । यसबाट सरकारमा र बाहिर रहेका पार्टीहरु सशंकित छन । विदेशीहरुलार्इ पनि पनि सशंकित बनाएको छ ।
माओवादीले त यो स्पष्टिकरण्ा र कारवाहीसँग नागरिक सर्वोच्चताको कुरा जोडेको छ ?
माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको गलत व्याख्या गरेको छ । नागरिक सर्वोच्चतामा सरकारले आप्‍mनो मातहतका निकायलार्इ काम र कर्तव्य प्रति जिम्मेवार बनाउने हो । तर, त्यो पनि सरकारको कार्ययोजना नीतिनियम कानुन अनुसार हुनुपर्छ । त्यसले मात्र विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ । हरेक कुरामा स्पष्टीकरण्ा माग्दा सेनाको 'मोरल डाउन' हुन्छ र राजनीतीकरण्ा हुन्छ ।
तपार्इले अहिलेको विबादलार्इ व्यक्त्तिmगत र्इगो भन्नुभयो तर, माओवादी सेनाले भाग लिँदा नेपाली सेनाले खेलकुद किन बहिस्कार गर्‍यो त ?
एउटै देशमा दुर्इवटा सेना हुँदैन । अन्य देशमा पनि दुर्इवटा सेना छैन । नेपाली सेना र माओवादी लडाकू दुवै प्रतिåन्दि हुन्‍ । एक अर्काविरुद्ध लडेका सेनाले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न अलि असहज हुन्छ नै । बरु माओवादीसेनालार्इ आधिकारीक रुपमा सेनाको मान्यता दिएर खेलकुदमा सहभागी गराउनु भन्दा क्ष्ोत्रगत अथवा अन्य कुनै हिसाबले सहभागि गराएको भए पनि हुन्थ्यो नि ।
माओवादी सेनाको अस्तित्वलार्इ स्वीकार गरेर नै शान्तिप्रत्रिmया अघि बढेको होइन र ?
अहिलेको मुख्य समस्याको विष्ाय दुर्इवटा सेना हो । १२ बुँदे दिल्ली सम्भmौता भए लगतै माओवादी सेनाको समायोजन वा व्यवस्थापनवारे स्पष्ट निर्ण्ाय गनर्ुपथ्र्यो । त्ससपछि पनि माओवादी र सरकारसँग शान्ति सम्भmौता लगायत विभिन्न सहमति भए । तर, माओवादी लडाकूको विष्ायमा स्पष्ट निर्ण्ाय हुन सकेन । यसै कारण्ाले यि विविध विवादको सिर्जना भर्इरहेको छ ।
कसको कारण्ाले हुन सकेन त ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नै यो कुराको टुङ्‍गो लाग्नुर्पथ्यो , तर राष्ट्रपति हुने लोभमा उहाँले माओवादीप्रति लचिलो बन्नुभयो । माओवादी सेनालार्इ नेपाली सेनामा राख्ने कि प्रहरीमा वा अन्यत्र कतै संविधानसभा निर्वाचन हुनुभर्दा अघि नै यो विष्ायलार्इ समाधान गरिहाल्नुर्पथ्यो । यस विष्ायमा अनमिनले लगायत सबै राजनीतिक दल उदासीन बन्दै आए ।
१२ बँदे सम्भmौतादेखी नै माओवादी सेनाको विष्ायमा उचित निर्ण्ाय भएन भन्ने हो ?
उनीहरुको बारेमा त्ससैबेला स्पष्ट निर्ण्ाय लिनुर्पथ्यो । योग्यता पुगेकालार्इ नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी वा जनपद प्रहरीमा समायोजन गर्न सकिन्थ्यो । बाकी रहेकालार्इ आयमुलक, विकासमुलक काममा राख्न सकिन्थ्यो । त्यस्तै स्वदेश या विदेशमा पनि रोजगारको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर, यसबारेमा स्पष्ट निर्ण्ाय नगरेर दलहरू मौन रहदै आए ।पछि अनमिनले काम सुरु गरेपछि पनि गल्ती गर्‍यो । उनीहरुलार्इ क्यान्टोनमेन्टमा राखीयो । हतियारको साचो पनि उनीहरुलार्इ नै दिर्इयो । त्यसैले अहिले पनि हतियार भिmकेर प्रयोग गरिरहेका छन्‍ । यो नै जटिल समस्या हो ।
नेपाली सेनाले 'कु' गर्छ भन्ने हल्ला आएको थियो, यस्तो सम्भावना छ ?
जब देशमा प्रजातन्त्र संथास्थागत हुुँदैन, दलबीच मनमुटाव बढ्‍छ जनतामा नैराश्यता छाउँछ, विदेशी चासो बढ्‍छ तब सैनिक 'कु' को सम्भावना रहन्छ । माओवादीको सरकार बन्छ भनेर पनि त कसैले पत्याएको थिएन तर बन्यो । 'कु'ु पनि त्यस्तै हो । यो अड्‍कल गर्न सकिदैन र योजनावå रुपमा पनि हुदैन । सेनाले अहिलेको माहोललार्इ कसरी हेरेको छ भन्ने मलार्इ थाहा छैन । तत्कालीन राजाले सत्ता हातमा लिँदा त थेग्न सकेनन्‍ भने के अहिले कसैले त्यसलार्इ थेग्न सक्छ र । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपाली सेनाले 'कु' गर्ला जस्तो लाग्दैन । जबसम्म बाह्‍य राष्ट्रको सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त हुँदैन तबसम्म 'कु' सम्भव छैन । तर, अहिले सत्ताधारी र विपक्ष्ाी दलबीच बढ्‍दो दूरीले सेनालार्इ केही गर्न स्पेस दिँदैछ जस्तो देखीन्छ ।
बाह्य राष्ट्र भन्नाले ?
निकटका छिमेकी राष्ट्रको सर्मथन हुनुपर्छ । कम्तीमा अहिले नेपालमा धेरै प्रभाव रहेका भारत र अमेरिकाको साथ समर्थन त चाहिन्छ ।
प्रशंग बदलौ,आठ सहायक रथीको म्याद नथपिएको कुरालार्इ कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाली सेनालार्इ उहाँहरुमध्ये केहीको सेवा अभैm आवश्यक छ । त्यसैले नेपाली सेनाबाट दक्ष्ा व्यक्त्तिm बाहीरीनु दुखदायी कुरा हो ।
तपार्इंको चाहि किन म्याद थप भएन ?
किन थपेन, त्यो त्यस बेलाका सरकारमा सहभागी नेता र सेनाप्रमुखलार्इ थाहा होला । तर त्यसबखत सेनामा म आवश्यक थिए । म जति तालिम र योग्य व्यक्ति सेनामा त्यतिखेर थिएन तापनि मलार्इ बिनाकारण्ा सेवाबाट फालियो । न्यायालयबाट न्याय पाउँदा पनि पुन:बहाली भएन । अचम्म छ यहाँ । नेत ृत्व हत्याउन करोडौंको खेल गर्नहरु नेपाली सेनामै छन्‍ । तिनीहरुले नै मलार्इ बलिको बोको बनाए ।सर्वोच्चले अहिले आठ सहायक रथीको विष्ायमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश तत्काल कार्यान्वयन भयो, तर तपार्इंको मुद्दामा किन भएन त ?यो आश्र्चार्यको विष्ाय हो । सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भर्इ मलार्इ पुन: बहाली गर्न फैसला हुँदा पनि कार्यान्वयन भएन । त्सवेला म्याद थप्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मेरो म्याद थप भएन । प्रधानसेनापति कटुवालले रक्ष्ाामन्त्रालयको स्वीक ृति चाहिन्छ भन्नुभयो । तर अहिले आठ सहायक रथीका विष्ायमा भने अन्तरिम आदेश जारी हुनेबित्तकिै कटुवालले तत्काल हाजिर गराउनुभयो । रक्ष्ााको स्वीक ृति चाहिएन । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोर्इराला लगायतका नेताबाट लोकतन्त्र र कानुनी शासनको ठाडो उपहास एवं अवज्ञा भयो । अहिले उनै कोइरालाले अहिले सर्वोच्चको कुरा गछर्न्‍, तिनै राजनीतिक दलका नेताको पनि कुरा फेरिएको छ । तपार्इलार्इ किन भेदभाव गरियो जस्तो लाग्छ ?
म हटेपछि कोही माथि उक्लन, नेताको विस्वाशपात्र बन्न त्यसो गरेका हुन्‍ । म पुर्न वहाली भएको भए सायद सेनामा यो अवस्था आउने थिएन । सेवामा भएको भए 'चिफ' त भन्न सकिन्न तर एक तह माथि रथी त अवश्य हुन्थें ।कटुवालजी पनि सेनाको संगठनका लागि होइन आफ्ना लागि लडिरहनुभएको छ । कटुवालजी स्वाभिमानी भएको मेरो पुर्नबहाली किन गर्नभएन ।
त्यसो भए नेपाली सेना पनि राजनीतिबाट मुक्त छैन ?
सिद्धान्तगत रुपमा राजनीतिमा चाख राख्न नेपाली सेनाले पाँउदैन । तर, हाम्रा जर्सापहरू व्यक्तिगत फाइदाका लागि र नेत ृत्व हत्याउनका लागि नेताको घरदैलो चाहार्नहुन्छ ।२०४६ सालयता नेपाली सेनामा पनि नेताको चाकरी गर्न त्रmम सुरु भयो । अहिले लोकतन्त्र आएको दुर्इ वर्ष्ाता त यो त्रmम भmन्‍ बढेको छ ।
अहिले देशमा देखीएका समस्याको समाधानको उपाय के त ?
देशलार्इ अहिले लिडरसिसको खाचो छ । लोकतन्त्र त आयो तर अभmै पूर्ण्ालोकतन्त्र आइसकेको छैन । जनताका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति हुनसकेको छैन । राजनीतिक दल जनताप्रति केन्दि्रत हुनुर्पछ । राष्ट्र र जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुर्पछ ।राष्टि्रयताका कुरामा माओवादीसँग मेरो समर्थन छ । तर, युद्धका बेला उठाएका कालापानी, सुर्ता जस्ता राष्टि्रय मुद्दाहरू अहिले माओवादीले पनि बिर्सका छन्‍ कि जस्तो लाग्छ ।
Posted by Yadav Humagain at 12:35 AM
Today is documentation indisposed, isn't it?